Thursday June 20, 2019 - 22:15:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in uu gubtay dhul boqolaal kun oo hiktar ah oo ay kuyiilleen beero sanadkiiba soo saari jiray dalagyo ay ku tiirsantahay nolosha malaayiin qof Suuriyaan ah.
Wax kabadan 60 maalmood oo xiriir ah wuxuu dab aad uxooggan ka kacayaa gobollo dhaca,bariga,waqooyiga iyo koonfurta wadanka suuriya oo muddo 7 sanadood ah ay ka socdaan dagaallo xooggan oo sababay dhimashada dad kabadan nus malyuun qof.
Dabkan oo ah mid si gaar ah ubeegsanaya beeraha soo saaro qamadiga ayaa saameyn ba'an ku reebay dadka danyarta ah iyo beeraladeyda noloshoodu ku tiirsantahay dalagyada maxalliga ah ee ay soo saaraan, gobollada ugu daran ee dabku ka kacay waxaa kamid ah Deyruzuur,Raqah,Suweydaa,Xalab iyo Xamaah.
meelaha ay maamulaan kooxaha mucaaradka ayaa la sheegay in dabku uu baabiyo boqolaal beero ah oo dalagyada qamadiga iyo khudaarta nuucyadeeda kala duwan ay ku beernaayeen, warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada ayaa lasoo dhigay muuqaallo muujinaya dabka oo xowlli sare ku socda waxaana guul darraystay iskudayo lagu doonayay in dabka lagu bakhtiijiyo.
Xiliga gubashada beeraha suuriya waxay kusoo aadday waqti uu soo dhawaaday goosashada qamadiga ayna foornooyinka waaweyn ee rootiga soo saara ay dareemayaan gaabis ku yimid qamadiga burka laga sameeyo.
Gobollada Alxasakah iyo Deyrzuur waa labada gobol ee ugu kheyraadka badan marka laga hadlayo shidaalka iyo qamadiga uu kutiirsanyahay dhaqaalaha wadanka.
qaar kamid ah beeralayda ayaa sheegay in khasaara weyn ay soo gaartay shacabka kadib markii beerihii ugu waaweynaa ee dalagyada soo saari jiray ay gubteen.